Blue Umthambo Georgia owumthelela kwesokudla Kura - Araks, nemingenela kwesokunxele Kura uqobo
Uma sinenhlanhla futhi umuntu iholide, kuba izivakashi eyayinecilongo ithuba ukuchitha iholide lakho eGeorgia. Lokhu onqenqemeni emangalisayo abatelekile ngobuhle izintaba ubuhle indawo. Lapha ungabona izingosi mlando futhi lasendulo izindawo ezisezintabeni, ukufunda ngamasiko abantu baseGeorgia lasendulo, ukubhukuda olwandle ecacile blue, ukuthuthukisa impilo, zama yasekuqaleni izitsha edumile emhlabeni wonke Georgian, bheka besina entabeni.
Leli zwe zizokhanga labo abajabulela imvelo intombi, amahlathi oluhlaza nasezintabeni eziphakeme. Kodwa namuhla, indaba yethu kancane okusheshayo entabeni imifula Georgia, ikakhulukazi, kwi zonke nomfula omude kunayo we Georgian Mktvari, kangcono eyaziwa ngokuthi i-Kura nemingenela yayo. It kuvela ezintabeni enyakatho Turkey, kweqa asempumalanga naseningizimu ye Georgia ne agelezela oLwandle iCaspian e-Azerbaijan. Ngo elingenhla ingxenye emfuleni odlula amanzi awo phakathi izigodi kwemihosha, okuyinto alternated nge emigodini nasezindaweni ezisehlanzeni, kulandela Tbilisi ngezinye izikhathi uyagijima ku imikhono ngabanye. Lapha, esigodini emfuleni uyanda okusheshayo, ngoba luhlala phansi.
Ngaphambi kokuba lifike kuleyo umlomo wakhe angaphezu kuka-200 km emfuleni kunezela owumthelela ngobukhulu kwesokudla Kura - Araks. umthombo wayo futhi waba yizimbaxa zivuliwe Bingelskom yokhalo Turkey, esezansi - endaweni Azerbaijan, futhi iwela Kura ngasedolobheni Sibirabad. owumthelela kwesokudla Kura Aras ukuba Ngokwezinga elikhulu iyona emfuleni umngcele uhlukanisa Armenia ne-Azerbaijan Iran naseTurkey. Isendaweni ibhange kwesokudla Araks Ararati Ukhahlamba. Ararati Omkhulu embozwe snows okuphakade ongaqondakali, ngaphansi kwayo, mhlawumbe, kuze kube yilolu suku amanxiwa ezifihliwe Umkhumbi KaNowa. Araks - akuyona nje owumthelela kwesokudla eMfuleni Kura, khona-ke nezinye imifula kuncane: ithempeli, Aghstev, Ahum, Kurekchay. Abaningi rechonki encane nje awunaso isikhathi ukuletha amanzi abo kuze Kura - basuke esetshenziswa ukunisela.
Emkhakheni Mingachevir kwesigubhu ngoba amanzi ayo ukugeleza komfula ingeza owumthelela kwesokunxele Kura - umfula Alazani. It kuvela emithonjeni esisogwini emithambekeni aseningizimu eCaucasus Greater endaweni engamamitha 2837 m ngaphezu kolwandle. Alazan - kwekulu sobunxele owumthelela Kura. Esikhathini sifinyelela engenhla eduze umthombo wamanzi emfuleni iyona esobala kakhulu wonke Eastern eCaucasus. Isigodi emfuleni iyikhaya ezikhangayo eziningi: ticongotekulindza lasendulo nemibhoshongo ukuzivikela, emanxiweni i wasendulo oyinqaba Bakhtrioni, ifa Prince Chavchavadze nabanye.
Enye owumthelela kwesokunxele Kura - Aragvi. Nokuhlanganiswa le mifula emibili enamandla futhi enhle ngaso sonke isikhathi, ungashiyi ngabandayo yezimbongi ezidumile Georgian. Futhi khumbula Lermontov "Mtsyri" eqhathanisa le mifula ne odade ababili hug? Isigodlo, ukhuluma imbongi, isasekhona namuhla. Yakhiwa ngekhulu 7th, ke iyingqayizivele bokwakha. Kulona kanye igquma eliseduze sezindela Jvari sobala ikakhulukazi njengoba kwemifula emibili, futhi amabhange babo besakaza Mtskheta lasendulo nge imibhoshongo yamakhambi amasonto.
Ogelezayo badabula leyo ndawo saseGeorgia, umfula begijima amanzi awo noma somfula Black Sea, noma iCaspian. Omningi owumthelela kwesokudla Kura Aras futhi Kura ngokwayo nazo zonke ezinye nemingenela e sesisonke ukukhuthazelela enkulu amanzi ukugeleza oLwandle iCaspian. River (umuntu main - Rioni), okuqondene umcengezi Black Sea, ungenalo uhlelo ezivamile futhi agelezele olwandle, ngasinye kwayona. Kunzima ukukucabanga, kodwa izwe ngokwendawo elincane Georgia AmananiBUDGET_NAME izinkulungwane 25 emifuleni nemifudlana ukuthi sizondla ikakhulu glacial neqhwa ancibilike amanzi, istochnikamii komhlaba ngenxa kwezulu, baphathe azungeze amanzi ayo avundile, ukuniselwa ezweni magic.
Colon Ukuhlanza Ukudla. Amathiphu namacebo
Indlela yokwenza isithombe njengoba ungenisa usebenzisa Photoshop?